Baiboly pejy 694 - Ny Baiboly
Voalohany < 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 Manaraka Farany
Hebrio toko 11 (tohiny)
26nataony ho harena be lavitra noho ny zava-tsoan'i Ejipta ny fijalian'ny Kristy, satria nijery ny valisoa izy. 27Ny finoana no nialany tany Ejipta, tsy aman-tahotra ny fahatezeran'ny mpanjaka akory, fa nijoro toy ny mahita ilay tsy fahita izy. 28Ny finoana no nanaovany ny Paka sy ny famafazan-dra mba tsy ho tratr'ilay nandringana ny lahimatoa ny zanak'Israely.
32Ary inona koa no holazaiko? Tsy ho ampy ny andro hilazako ny amin'i Jedeona, Baràka, Samsona, Jefte, Davida, Samoela, mbamin'ny mpaminany: 33fa noho ny finoana koa izy ireo dia nandresy fanjakana maro, niasa ara-drariny, nahazo ny nampanantenaina, nanakombona ny vavan'ny liona, 34namono ny herin'ny afo, afaka tamin'ny lelan'ny sabatra, nositranina tamin'ny aretina, nampiseho herim-po tamin'ny ady, nampandositra ny miaramilan'ny fahavalo; 35nandraisan'ny vehivavy ny zanany maty voatsangana tamin'ny maty. Ny sasany nampijalina ho faty, nefa tsy nety nanao izay hahafahany, mba hahazoany fitsanganana amin'ny maty tsaratsara kokoa; 36ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka ary gadra mbamin'ny tranomaizina; 37notoraham-bato izy, notsofana, nalaim-panahy, novonoina tamin'ny sabatra, nirenireny nitafy hoditr'ondry sy hoditr'osy, tsy nanana na inona na inona, nenjehina, nampahorina, 38nefa tsy mendrika ho nitoerany akory izao tontolo izao, nirenireny tany an'efitra izy, sy tany an-tendrombohitra, ary tany an-johy mbamin'ny tany an-davatany. 39Na dia nankalazaina noho ny finoana aza anefa izy rehetra ireo, dia tsy nisy nahazo ny nampanantenaina, 40fa isika no namboaran'Andriamanitra zavatra tsaratsara kokoa, ka tsy tonga amin'ny fahatanterahana ireo raha tsy efa mby eo koa isika.
25Tandremo fandrao mandà izay miteny hianareo; fa na ry zareo nandà izay niteny teto an-tany aza tsy afa-nandositra, ka mainka isika raha mandà ilay miteny amintsika avy any an-danitra, 26dia ilay nanonzongozona ny tany fahizany tamin'ny feony, sy manome teny indray ankehitriny manao hoe: Indro hozongozoniko indray maka koa, tsy ny tany ihany, fa ny lanitra koa. 27Ny teny hoe indray maka koa milaza fa ny zavatra hozongozonina dia hovàna araka ny fomban-javatra natao, mba haharetan'izay zavatra tsy hozongozonina. 28Ary noho isika mandray fanjakana tsy azo hozongozonina, dia tano mafy ny fahasoavana, hoentintsika manao fanompoam-pivavahana ankasitrahan'Andriamanitra amim-panajana sy fahatahorana azy. 29Fa ny Andriamanitsika dia afo mandevona koa.
Pejy: Voalohany < 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3506 seconds